श्रीमती साट्ने प्रस्ताव ? बाहिरियो पारश शाह र रामकृष्ण ढकालबिचको लफडाको सत्यता (भिडियो सहित) - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक ०६, २०७५ समय: १४:१४:१९
ईटहरी/ नेपालमा सेलिब्रेटी वा कुनैपनी ब्याक्तित्वको कुराहरु बाहिर आउदा त्यो केही विशेष छ भने चर्चाको सिखर नै चुम्छ । अहिले यस्तै भएको छ । युट्युब ट्रेन्डिङ भनेको सर्बाधिक चर्चामा आएको भिडियो भन्ने यथार्थता हो । फिल्म सायद २ ले कब्जा गरिरहेको युट्युब नेपाल ट्रेन्डिङको पहिलो स्थानमा अचानक एउटा भिडियो यो समाचार तयार पार्दै गर्दा सायद २ लाई बिस्थापित गर्दै आईपुगेको छ ।
भिडियो हो, गायक रामकृष्ण ढकाल र पुर्व युवराज पारस शाह बिचको श्रीमती साट्ने कान्ड । निकै पुरानो हो यो बिषय तर अहिले फेरि चासोको बिषय बनेर बाहिर आएको छ । हल्लाको बिषयलाई गायक रामकृष्ण ढकालले हल्ला नै हो यो सत्य हैन भनिरहेका छन भने यो बिषयमा संका पनि गर्न छोडिएको छैन । अझ बिस्तृतमा हेर्नुस् हाल सार्बजनिक भिडियो ।
करिब १५ बर्ष अघि गायक रामकृष्ण ढकाल नीलम शाह काम गर्ने कलेजमा पुगेका थिए, भाइको फर्म भर्ने बहानामा । तर, खासमा उनी नीलमसँग ‘चक्कर’ चलाउने सुरमा त्यहाँ गएका थिए, भाईको फर्म भर्नु एउटा नाटक मात्र थियो । त्यो चक्कर पछि प्रेम र त्यसपछि विवाहमा बदलियो ।
रामकृष्ण लाई यो बिषयमा एक पत्रकारले केही अघि प्रश्न गर्दा यस्तो जवाफ दिएका छन “हुँदै होइन । त्यो समाचारै फेक थियो । कति खण्डन गर्नु भनेर पछि वास्तै गर्न छाडेका थियौँ हामीले । वास्तवमा त्यतिबेला उहाँ र हामी एकैदिन नगरकोट पुगेका थियौँ । पहिल्यैदेखि चिनजान भएकाले सँगै बसेर गफ गर्न थाल्यौँ । मैले उहाँलाई गीत पनि सुनाएको थिएँ । डिनर पनि सँगै खाएका थियौँ ।
पछि उहाँकै एक कर्मचारीले मलाई कुनामा बोलाएर ‘सरकारसँग अलिकति दूरी मेन्टन गर, धेरै नजिक नहोऊ’ भने । मलाई झनक्क रिस उठ्यो । तीन घण्टा गीत गाएर फ्रीमा इन्टरटेन नि गराउनुछ, उल्टै मलाई चेतावनी दिने ! यो त राम्रो भएन नि भनेको थिएँ मैले । यही विषयमा हाम्रो भनाभन लम्बियो ।
पछि यो कुरा उहाँको कानसम्म पुगेछ । उहाँले ती कर्मचारीलाई ‘रामकृष्ण इज माई फ्रेन्ड’ भनेर हप्काएपछि थप बबाल भएको हो । उहाँहरू निस्केपछि अरूले ‘बी केयरफुल’ भनेका थिए । पछि त पारसले रामकृष्णलाई मुक्का हानेर घाइते भई हस्पिटलमा एडमिट भएकोदेखि म मरेकोसम्मका समाचार छापिए । यो हल्ला चल्दाचल्दै फेरि एकपटक भेटेर हामीले सँगै डिनर खाएका थियौँ ।